Raha hianatra any ivelany ihany dia Kyoto/留学するなら京都 | 京都留学情報 by京都府　Information about studying abroad in Kyoto, Japan by Kyoto Prefecture
Raha hianatra any ivelany ihany dia Kyoto/留学するなら京都
Randriamanantsoa Oliver Stephane　ランドリアマナンツァ・ステファン・オリヴィエ（マダガスカル出身）
Stéphane no anarako avy any Madagasikara.
Ny ankamaroan’ny mpianatra vahiny rehefa hisafidy ny oniversite hianarany dia mazana Tokio foana satria any tokoa moa ny renivohitr’ i Japon. Saingy, maro anefa ny toerana afaka hianarana aty Japon toy i Kyoto izay tanana tsara sy milamina tokoa, ary anisan’ny tanana manana ny tantarany mahaizy azy tokoa. Tsy izay ihany fa anisan’ny toerana mahasarika mpizaha tany satria maro tokoa ireo toerana azo tsidihana. Noho izany dia anisan’ny toerana tsara ho an’ny mpianatra vahiny ny tanànan’ i Kyoto. Tena kanto sy madio tokoa ny tanana, ary dia tena tsara fandray tokoa ny mponina, ary dia toy ny any amin’ny firenena misy anao tokoa iano. Marina tokoa fa ny fianarana aty ivelany dia midika ho fisarahana amin’ny fianakaviana ary tsy vitsy ireo mpianatra manana ahiahy alohan’ny ahatongavany. Sangy i Kyoto kosa dia anisan’ny tanàna tsara fandray raha ny mpianatra vahiny no resahana, ary tena efa nivoninana tokoa amin’ireo foto-drafitr’asa handraisana izany. Ka raha hisafidy ihany dia aleo Kyoto.
投稿日: 3月 30, 2015 投稿者:studykyoto カテゴリー: Madagascar マダガスカル, Study in Kyoto, university 京都留学・大学